चीन बी यूएफओ लाइट कारखाना र निर्माताओं | लिपर
LPUF-200B01 २००W 18380-18650LM N ∅375x125mm
उच्च खाडी प्रकाश व्यापक रूपमा स्टेडियम, पसल, गोदाम र औद्योगिक स्थानहरूमा प्रयोग गरिन्छ। यी सबै स्थानहरूको साझा सुविधा छ: छत धेरै उच्च छ, यसलाई स्थापना गर्न वा प्रतिस्थापन गर्न सजिलो छैन। यदि तपाइँ औद्योगिक प्रकाश स्थापना गर्न वा प्रतिस्थापन गर्न चाहानुहुन्छ, त्यहाँ एक धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न आउँदछ: कसरी एक राम्रो एलईडी लाइट बे लाईट छनौट गर्ने?
स्थायित्व, ऊर्जा दक्षता, राम्रो डिजाइन, चमक, लागत यी सबै कारकहरू तपाईं विचार गर्नुहुनेछ।
Lipper IP65 UFOs तपाईंलाई यी सबै आवश्यकताहरू पूरा गर्न एक राम्रो औद्योगिक प्रकाश समाधान प्रस्ताव गर्न सक्दछ।
प्याटेन्टेड डिजाइन—कूलिंग फिनको साथ यूएफओ आकार सबै एक डिजाइनमा, सरल र सुरुचिपूर्ण, बजारमा धेरै अनौंठो हुन्छ। म निजी मोड, तपाईं बजारमा ठ्याक्कै त्यस्तै फेला पार्न सक्षम हुनुहुन्न।
स्थायित्व—कलि cast्ग फिन्सको साथ कास्टिंग एल्युमिनियम तताउने सि Die्कले राम्रो तातो खपत सुनिश्चित गर्दछ। जब तापक्रम बढ्ने उमेर परीक्षण गर्दै, हामी तापक्रम बत्तीको महत्त्वपूर्ण अंशको पत्ता लगाउँदछौं, जस्तै नेतृत्व चिप, इन्डक्टन्स, मूसफेट, बत्ती शरीर। लिपर एलईडी यूएफओ लाइटहरू राम्रो एन्टी-क्रोजन कोटिंगको साथ छन् जुन २ hours घण्टाको नुनिलो स्प्रे परीक्षण पार गर्न सक्छ। राम्रोसँग नियन्त्रण गरिएको प्रकाश तापक्रम र एन्टी-क्रोक्सन पेंटिले लामो आयु अवधि (00०००० घण्टा।) को ग्यारेन्टी गर्दछ।
ऊर्जा दक्षता र चमक—१०० डब्लु र २०० डब्लु दुई मोडेलहरू उपलब्ध छन्। यी बत्तीहरू हाम्रो अँध्यारो कोठाबाट टेस्ट डाटाको अनुसार १००mm / w को उर्जा क्षमतामा काम गर्दछन्। पुरानो परम्परागत प्रकाशसँग तुलना गर्दा यसले 70०% सम्म ऊर्जा बचत गर्न सक्दछ।
आईपी ​​सुरक्षा—हाम्रो यूएफओ एलईडी बत्तीहरू २65 घण्टाको लागि तातो राज्य अन्तर्गत पेशेवर वाटरप्रूफ टेस्ट मेशिन द्वारा परीक्षण गरिएको IP65 मा पुग्न सक्छ।
हल्का प्रभाव—उच्च सीआरआई र आर>> ० (गोलाकार एकीकरण गरेर परीक्षण गरिएको) ले प्रकाश मुनिको विषयलाई थप र colorful्गीन बनाउन र वास्तविक रंग देखाउन सक्छ। यस सुविधाको साथ, Lipper UFOs सुपरमार्केटमा प्रयोग गर्न सक्दछ, रेस्टुरेन्ट अझ सामान आकर्षक देखाउन मद्दत गर्न।
र त्यो सबै होइन! Lipper UFOs सीई र रोश-प्रमाणित छन् र-बर्षे ग्यारेन्टीको साथ आउँछन्। यो ह्यान्डल गर्न, स्थापना गर्न र मद्दत गर्न सजिलो छ। हामी परियोजना गरिरहेका ग्राहकहरूको लागि आईईएस फाइल पनि प्रस्ताव गर्दछौं ताकि तपाईं यस परियोजनाको लागि वास्तविक प्रकाश वातावरण अनुकरण गर्न सक्नुहुनेछ।
अघिल्लो: E ब्याकलिट प्यानल लाइट
अर्को: कोण समायोज्य E ट्र्याक लाइट
उच्च बे प्रकाश कभर
Ufo उच्च बे प्रकाश
Ufo नेतृत्वमा उच्च बे प्रकाश
Ufo Led लाइट्स 100 w
डी न्यू उच्च बे प्रकाश